Maka: uhlu lwe-imeyili | Martech Zone
I-Tag: uhlu lwe-imeyili
Abathengisi abaningi be-B2B bayazi ukuthi ukumakethwa kwe-imeyili kungaba ngamathuluzi wokukhiqiza ahola phambili kakhulu, ngocwaningo oluvela ku-Direct Marketing Association (DMA) olukhombisa i-ROI emaphakathi engu- $ 38 nge $ 1 ngayinye esetshenzisiwe. Kepha akungabazeki ukuthi ukusebenzisa umkhankaso we-imeyili ophumelelayo kungaba nezinselelo zawo. Ukuqonda kangcono izinselelo ababhekene nazo abathengisi, umhlinzeki we-imeyili wokumaketha i-imeyili uDelivra wahlangana ne-Ascend2 ukwenza ucwaningo phakathi kwalezi zilaleli. Imiphumela
NgoLwesibili, Januwari 10, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Inombolo yabathengisi ngaphandle lapho ekwazi ukuhlanganisa i-imeyili yakho kanye nohlu lwamakhasimende enedatha yezenhlalo iyancipha. Amapulatifomu ezokuxhumana aya ngokwengeziwe engeza izilungiselelo zobumfihlo ukunciphisa ukusabalala kwalolu lwazi. IFlowtown neRapleaf azibonakali zinikeza imininingwane yephrofayili yezenhlalo. Ukuma okukodwa embonini kubonakala sengathi yiFliptop (nabo abathenga iQwerly). IFliptop iguqule ibhizinisi layo ngasekupheleni kuka-2011 yangenza nje ithuthukisa ubuhlakani bezenhlalo.
Okuqanjwa kabi njalo okungaqondakali kahle, ukuqashwa kohlu lwe-imeyili kuwumkhuba wokumaketha owamukelwa kabanzi onganikeza i-ROI enamandla, uma wazi ukuthi yini okufanele uyibheke futhi uyihloniphe ibhokisi lokungenayo. Uma ungajwayele noma ungathandeki ngokuqasha uhlu lwe-imeyili nakhu ukwehla kwezinzuzo kanye nezici zayo ezibalulekile zokuhlukanisa nokucatshangelwa.
Kuthunyelwe nguChristina Warren: Kithina, uhlobo lokuhlaselwa kwe-SEO okuvezwe kuleli sonto yizinyathelo ezimbalwa nje ukusuka kulokho amathani ama-blogger / amawebhusayithi akwenzayo nsuku zonke: ngamabomu zama izinjini zokusesha zegeyimu ukuze zithole ukushaya okuningi kusayithi labo, futhi ngokwengeza, mhlawumbe yenza amadola ambalwa. Ngaphandle kokuthi usebenzisa i-link-straight-up scam link-farm noma kakhulu, unenhlanhla kakhulu - isikhundla esiphakeme kakhulu senjini emhlabeni